CAP MASOALA : Misy sambo ahian’ireo mpanjono hanondrana andramena
Araka ny angom-baovao voaray avy amin’ireo mpanjono madinika ao Maroantsetra, izay tena sarotiny tokoa amin’ny fiarovana ireo harem-pirenena, dia misy sambo lehibe ahian’izy ireo fatratra hanondrana andramena ao amin’ny fari-dranomasina Masoala eo anelanelan’i Maroantsetra sy Antalaha iny amin’izao fotoana izao. 21 août 2017
Ny vaovao avy amin’ireto mpanjono tsara sitrapo any amin’ny Distrikan’i Maroantsetra ireto no nahalalana fa efa andro maromaro izay io sambo lehibe io no nihaodihaody any amin’ny fari-dranomasin’i Masoala. Eny ampovoan-dranomasina no miantsona ilay sambo ary tsy mihetsika firy.
Tazan’ireo mpanjono izy io saingy tsy mbola nanatona aloha izy ireo noho izy afovoan-dranomasina, ka manano sarotra ny fanatonana vokatry ny tsy fahampian’ ny fitaovana, araka ny vaovao voaray hatrany. Ny faritra misy ilay sambo anefa dia faritra mena tokoa amin’ny fanondranana andramena antsokosoko. Manahy amin’ny fikasana fanondranana andramena noho izany ireo mpanjono madinika ao Maroantsetra, ka miantso fandraisana andraikitra haingana avy amin’ireo tompon’andraikitra voakasika.
Sarotiny amin’ny fivoahan’ireo harem-pirenena an-tsokosoko ireo mpanjono madinika ao Maroantsetra. Manaporofo izany izao fandraisana andraikitra asehon’izy ireo izao amin’ny alalan’ny fisorohana sy fanairana ireo tompon’andraiki-panjakana izao dieny mbola tsy lasa ireo harem-pirenena.